DEPIOTE ANYAH - BORIBORINTANY FAHA-3 : Manome tohan’aina ho an’ireo mpianatra hanala Cepe
Tsy niandry ela fa avy hatrany dia nirotsaka namaly ny hetahetan’ireo tompon’andraikitra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra amina sekoly ambaratonga fototra (EPP) miisa 13 ao anatin’ny boriborintany faha-3 ny solombavambahoaka voafidy teny an-toerana, ny Depiote Anyah. 13 août 2019
Marobe ny fitarainana voarainy mahakasika ny fihenan’ny taham-pahavitrihan’ireo mpianatra. Nihena ambany dia ambany ihany koa ny taham-pahaizan’ireo ankizy satria dia tsy misy afa-tsy 12%-n’ny mpianatra amin’ny kilasy faha-7 eo anivon’ireo Epp ireo no mba nahazo naoty tsara. Tsy tambo isaina ireo antony mahatonga izany raha tsy hilaza fotsiny ny tsy fanjariana ara-tsakafo mianjady amin’ireo ankizy mpianatra. Ny sakafo izay anisany miantoka betsaka amin’ny fahazotoana na ara-tsaina na ara-barana. Manoloana izany indrindra no nahatonga ny solombavambahoaka Anyah nanatanteraka ny tetikasa “tohan’aina”.
Tetikasa natao hiantohana ny tohan’aina ho an’ireo ankizy indroa ao anatin’ny herinandro iray. Mbola ireo mpianatra amin’ny kilasy faha-7 hiatrika ny fanadinana Cepe ihany aloha hatreto no misitraka izany ary tsy hijanona ity tetikasa ity raha tsy tonga ny andro hanatanterahana ny fanadinam-panjakana Cepe. Tanjona apetraka ao anatin’ny tetikasa “tohan’aina” ny hampiakatra ny taham-pahavitrihan’ireo mpianatra hianatra indrindra amin’izao fotoana ankatoky ny fotoam-panadinana izao, hampiakatra ihany koa ny tahan’ny mpianatra afa-panadinana.
Ireo mpianatra ao amin’ny kilasy faha-7 hanala Cepe ihany aloha no misitraka an’ity tetikasa ity fa heverina ny hanaparitaka izany ho an’ny kilasy rehetra ary hiitatra hatrany amin’ny sekoly ambaratonga fototra faharoa (Ceg) ho an’ireo hanala ny fanadinana Bepc. “Velirano nataon’ny Filoha Andry Rajoelina rahateo ny hisakafoanan’ny vahoaka malagasy ara-dalàna”, hoy ny fanazavany.